Qaxooti Yamaniyiin ah oo deeq raashiin ah la gaarsiiyay – Radio Muqdisho
Qaxooti Yamaniyiin ah oo deeq raashiin ah la gaarsiiyay
Deeqdan raashiinka ah oo uu gudiga samatabixinta qaxootiga Soomaaliyeed uu u qeybiyay dadka Yamaniyiinta ah ee ka soo qaxay dalkooda ayaa waxa ay ka timid hey’adda Islamic relief oo kamid ah hey’adaha samafalka ee ka howlgala dalka, waxa ayna ka koobneed Bur, Bariis, Saliid, Sonkor, Caano, Boorash iyo Tirmir kaaso oo looga qeybiyay konton qoys oo ah dadka yamaniyiinta ah oo ku nool degmada Shibis ee gobolka Banaadir.
Qaar ak mid ah dadkii maanta ka faa’ideystay deeqadan ayaa ka mahadceliyay deeqda ay soo gaarsiiyeen gudiga samatabixinta qaxootiga Soomaaliyeed iyo hay’ada Islamic relief.
Xoghayaha gudiga badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed Dr Sakariye Maxamed Axmed [Hurre] oo ka hadlay goobta ayaa ka warbixiyay deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka walaalaha ah ee ka soo qaxay dalka Yemen oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho.
“Dadkan walaalaheena ah ee dhibaateysan inay wax u gartaan runtii raashiinkan waxa uu ka kooban yahay Bur oo 15 kiilo ah Bariis oo 15 kiilo ah Sonkor oo 7 kiilo ah Saliid oo 3 Litir ah Timir oo laba kilo ah iyo Boorash oo Shan kiilo ah, hay’adda Islamic relief wey mahadsanyihiin anaga ka gudiga qaxootiga ahaan waan ku wareejinay”, ayuu sheegay Hurre.
Gudoomiyaha degmada Shibis ee gobolka Banaadir Axmed Muumin Axmed aya ugu mahadceliyay hay’adda Islamic relief iyo gudiga badbaadinta qaxootiga Soomaliyeed oo soo garsiiyay deeqda raashiinka ah dadka qaxootiga ah ee ka yimid dalka Yemen.
Tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay dalka Yeman ayaa waxaa dalka Soomaaliya ku soo qulqulayay dadka ka soo baxsanaya colaadda ka oogan dalkaasi kuwaas oo isugu jira Soomaali iyo Yamaniyiin, iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay u istaageen sidii dadkaasi loo caawin lahaa.
Kulan looga hadlayay adkeynta amniga oo Jowhar lagu qabtay
Wasiir ku xigeenka shaqada iyo arimaha bulshada oo tababar u soo xirey dhalinyaro